Afhayeenka madaxtooyada HS oo si weyn loogu so dhaweyey London kedib howlo shaqo oo uu tagay halkas.
Posted by admin on February 23 2011 22:15:08
Arbaco 23,Feb 2011(HSOL)-Afhayeenka madaxtooyada HS oo si weyn loogu soo dhaweyey London kedib howlo shaqo oo uu tagay halkas.
Waxaa safar booqasho ah ku yimid habeen hore wadanka UK qaasatan magaalo madaxda London afhayeenka madaxtooyada Hiiraan state mudane Maxamed Keynaan. halkaasi oo ay si wanaagsan ugu soo dhaweeyeen jaaliayda reer Hiiraan iyo madax ka tirsan xukumada Hiiraan State.
Waxaa sharaf noo ah inaan xaflad casho sharaf ah oo soo dhaweyn
ah u samayno walaalkeen Maxamed Keynaan oo ka mid ah dhaliyaradii ku dhabar adeygay inuu miro dhalo shirkii lagu soo dhiaay xukumada HS. Keynaan waa nin dhaliyaro ah markastana ka shaqeeya isku xirka iyo horumarinta midnimadda reer Hiiraan iyo soomaaliya weyn.
Ahna afhayeenka madaxtooyada Hiiraan State ayaa marti sharaftii halkaasi iskugu timid ugu mahadceliyey soo dhaweynta isagoo halkaasi ka sheegay inuu u yimid sidii ula kulmi lahaa masuuliyiinta Hiiraan State ee ku nool Yurub qaasatan UK.Afhayeen keynaan ayaa halkaasi joogay mudo afar maalmood ah isagoomudadii uu joogay la kulmay qeybaha kala kedisan ee jaliyada reer Hiiraan mucaarad iyo muxaafidba isagoo dhageysan doona codka shacabka kedibna u gudbin doona madaxweynaha Hiiraan State hadba waxii fariin ah oo ay ugu dhiibaan.
Masuuliyiinta ka hadahsay xafladaas ayaa waxaa ka mid ahaa.
1- Wasiirka warfaafinta HS Amabasador Xooshoow 2 -Taliyaha booliska gen Qaliif Muumin Tooxow. Waxaa sidoo kale ka hadlay halkaas
3 Xassan Kaafi 4 Osman raage sanay 5 Shiine Caruush
ugu danbeyntii madaxda Hiiraan oo intooda badan ku sii jeeda Somaliya ayaa ka hor inta aysan safarin iyagu kualmo horu dhac ah ka yeelanaya howlaha horyaalo HS.